ဇုလုံးဝဒဏ္ဍာရီဘုရားပေါ်တွင်အခြေခံကြောင်းလူကြိုက်များ slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကစားရန်အလွန်ဇာတ်ဆောင်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, လည်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရုံလည်းကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းအချို့သောထိပ်တန်းဆုကြေးငွေနှင့်အတူကြွလာ. အဘယျသို့ဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုစိတျလှုပျရှားဖှယျသည်သူတို့နှစ်ဦးထက်ပိုအလားတူဂိမ်းစတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. သောကြောင့်သူ့ရဲ့ကျော်ကြားမှု၏, လူများကကျော် Gaga သွားကြသည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ခမ်းနားဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအချို့သောသမိုင်း-based ဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့လျှင်ဒီ အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေနှင့်အတူနယူး slot သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်.
ဇု slot ၏ developer များအကြောင်း
Zeus is developed by the multinational company WMS that has been making some wonderful games. အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေဂိမ်းနှင့်အတူဤနယူး slot ၏ကျော်ကြားမှုမှာလိုက်ရှာ, WMS ပြီးသားနောက်ဆက်တွဲဗားရှင်း၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူအချို့သော features အသစ်ထည့်သွင်းစတင်ခဲ့သည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီဖောက်သည်များ၏ရရှိမှုအရှိန်အဟုန်နှင့်အတူဤအလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အားလုံးမှတ်တမ်းများကျိုးပျက်ခဲ့သည်. ကျွမ်းကျင်မှုအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေဂိမ်းနှင့်အတူဤနယူး slot ထဲမှာသွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်နှင့်အတူ, သူတို့သည်နောက်တဖန်အချိန်ဆက်ခံခြင်းနှင့်ကြပြီ.
ဇုပါဝင်ပါသည် 30 paylines နှင့်5ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားပေါင်းစပ်အနိုင်ရများ၏စက်ရုံနှင့်အတူရက်ကြောင့်မှားယွင်းသည့်စနစ်. သူတို့သည်သင့်ကို re-လှည့်ဖျားကိုကိုင်ပေါ်တွင်သင်၏ဟောင်းအနိုင်ရရှိစောင့်ရှောက်နိုင်သောနေရာပြန်လည် spinning လို့ခေါ်တဲ့ feature တွေနဲ့နားလည်ဘယ်သူမျှမအပ်ငွေနှင့်အတူနယူး slot တွေ့ကြုံရရန်မလွယ်ကူကြောင်းတစ် Electrify ဆောင်ပုဒ်များ.
အဆိုပါဒဏ္ဍာရီဆောင်ပုဒ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့် Pegasus နှင့်စောင်းကဲ့သို့အခြို့သောအခြားဇာတ်ကောင် features. သူတို့ကအစငွေနှင့်ရွှေဒင်္ဂါးပြားများ. အဆိုပါ slot ကစက်ရှိပါတယ်3အရေးကြီးသောသင်္ကေတကိုကြဲဖြန့်, ထိုလျှပ်စီးနှင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်.
သငျသညျအခြို့ကိုမှန်ကန်ငွေသားအနိုင်ရနိုင် $2,500 သငျသညျတခုမျှတငွေပမာဏကိုအာမခံသောအခါ $150. အဆိုပါစက်ကိုလည်းသင်မှာနိမ့်ဆုံးလိုင်းအလောင်းအစားနှင့်အတူတစ်ကြိမ်ကိုသုံးနိုငျသောဒင်္ဂါးပြားကမ်းလှမ်း 0.30 ဒေါ်လာနှင့်အမြင့်ဆုံးမှာ $5. သူတို့ကအစသင်အလိုလိုဖွင့်ကလစ်နှိပ်နှင့်သင့်ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်သည်ဘယ်မှာအလိုလိုဖွင့်တဲ့အချိန်ချွေတာ option ရှိသည်.
WMS အခမဲ့ဂိမ်း၏အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအချို့သောကြီးမားသောလူကြိုက်များခံစားခဲ့ပြီးအများကြီးကိုအာရုံစိုကျစပါးကိုရိတ်လိုက်ပါတယ်. ဂိမ်းရဲ့ setting ကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းတဲ့ feature ကိုသူ့ဟာသူနှင့်အတူအလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်အပိုဆုကြေးငွေများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဂရပ်ဖစ်လာ. အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေဂိမ်းနှင့်အတူအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဒီနယူး slot ၎င်း၏ဖောက်သည်အကြားဒီတော့ရေပန်းစားသည်.